Idei mmiri na Germany: mmebi, ọdachi na mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Portillo nke German | | Ihe gbasara ihu igwe, Idei mmiri
na idei mmiri na Germany ha akarịala ozi ọma niile taa. Ọ bụghịkwa obere ọdachi na-eme na mba a. Ọ dịkarịa ala mmadụ 120 anwụọla na ọtụtụ narị ndị ọzọ na Western Europe na-efu efu mgbe ụfọdụ idei mmiri kachasị njọ n'ime ọtụtụ iri afọ. Oke mmiri ozuzo mere ka osimiri tojubiga, na-ebibi mpaghara ahụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị akụkọ niile gbasara ide mmiri na Germany na ihe egwu anyị na-eche ihu maka mgbanwe ihu igwe.
1 Idei mmiri na Germany
2 Mgbanwe ihu igwe na idei mmiri na Germany
3 Oké mmiri ozuzo
4 Enwere ike izere ya?
Na Germany, ebe ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ ugbu a karịrị 100, Angela Merkel kpọrọ oku maka mkpebi siri ike megide mgbanwe mgbanwe ihu igwe. Ọ dịkarịa ala, mmadụ 20 nwụrụ na Belgium. Netherlands, Luxembourg na Switzerland na-emetụtakwa. Ọtụtụ ihe na - esochi oke ide mmiri, mana ikuku ọkụ nke mgbanwe ihu igwe na - ebute nwere ike nwee oke mmiri ozuzo.
Warwa adịworị ọkụ gburugburu 1,2 Celsius C ebe ọ bụ na oge mmepụta ihe malitere na ọnọdụ okpomọkụ ga-aga n'ihu na-arị elu belụsọ na gọọmentị gburugburu ụwa na-egbusi nsị.
Otu agadi nwoke gbalịrị ịbanye n’obodo nke fọrọ nke nta ka ọ bibie. O kwuru na ụmụ ụmụ ya nọkwa ebe ahụ, mana ọ hụghị ndị ikwu ha. Ọbụna ndị ọchịchị ekwuola na ha ejighị n'aka mmadụ ole na-efu efu. Enweghị akara ekwentị na ọtụtụ mpaghara na nkwukọrịta fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume. Mana ọnụọgụ ọnwụ taa na-atụ anya ịrị elu, ka oge na-aga, etu ọdachị a siri pụtawanye.
N’akụkụ Osimiri Ahr, e nwere ahịhịa gbagọrọ agbagọ nke ụlọ idei mmiri jupụtara, àkwà mmiri ndị gbawara agbawa, ebe ndị mara ụlọikwuu, na ogige ntụrụndụ ndị na-adọkpụ. Maka ọtụtụ ndị bi ebe ahụ ma gosipụta mmebi ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iche n'echiche ma bido. Odika E zigala ndị uwe ojii, ndị agha na ndị ọrụ mberede 15.000 na Germany iji nyere aka nyocha na nnapụta.
Na Belgium, ihe osise mmiri iju mmiri na-egosi ụgbọ ala na-adọkpụrụ n'okporo ụzọ Verviers. N'ihi ihe ize ndụ nke ohi, e guzobewo iwu ị kwesịrị ime n'abalị.
Liege bụ obodo nke atọ kacha ukwuu na Belgium mgbe Brussels na Antwerp, bụ ndị e nyere iwu ka ha pụọ ​​na Tọzdee. Ndị isi obodo na-ekwu na ndị na-enweghị ike ịpụ ga-akwaga n'ụlọ elu kachasị elu nke ụlọ ha. Osimiri Meuse nke na-agafe n’obodo ahụ gbabara na ụtụtụ Fraịde, jiri obere ego nke jubigara ókè na mpaghara ụfọdụ.
Mgbanwe ihu igwe na idei mmiri na Germany
Ndị ọkà mmụta sayensị katọrọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka enweghị ike ichebe ụmụ amaala ha pụọ ​​na omume ihu igwe dị oke egwu, dịka idei mmiri dị na mgbago ugwu Europe na ikpo ọkụ ọkụ na United States. Ruo ọtụtụ afọ, ha ebuola amụma na n'ihi mgbanwe ihu igwe nke mmadụ mere, mmiri ozuzo oge ọkọchị na ebili mmiri okpomọkụ ga-akawanye njọ. Hannah Cloke, prọfesọ hydrology na Mahadum Ọgụgụ kwuru, sị: 'Ọnwụ na mbibi nke idei mmiri na Europe bụ ọdachi nke kwesịrị izere”. Ndị amụma na-ebu ịdọ aka na ntị na mbido izu a, mana akwụghị ụgwọ zuru ezu na ịdọ aka na ntị ma nkwadebe ezughi oke.
Eziokwu ahụ bụ na akụkụ ndị ọzọ nke Northern Hemisphere na-enwe ihu igwe ọkụ na-enwetụbeghị ụdị ya na ọkụ kwesịrị ichetara ndị mmadụ na n'ime ụwa na-ekpo ọkụ na-arịwanye elu, ihu igwe anyị nwere ike ịdị ize ndụ karị.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na gọọmentị ga-belata ikuku carbon dioxide nke na-eso akpata oke ihe ma kwadebe maka ihu igwe dị oke njọ. Agbanyeghị, na UK, nke tara oke ide mmiri na Mọnde, Kọmitii Na-ahụ Maka Mgbanwe Ihu Igwe nke Gọọmentị gwara ndị ozi nso nso a na njikere mba ahụ maka oke ihu igwe ka njọ karịa afọ ise gara aga. Kwuru gọọmentị ezutela naanị otu ụzọ n'ụzọ ise nke mbelata mgbasa ya.
Naanị n’izu a, gọọmentị Britain gwara ndị mmadụ na ọ dịghị mkpa ka ha belata ụgbọ elu n’ihi na teknụzụ a ga-edozi nsogbu anwuru, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na nke a bụ ịgba chaa chaa.
Oke mmiri ozuzo na-aga n'ihu na-akpata nchegbu na mpaghara Europe dum. Ndị isi gọọmentị lekwasịrị anya ugbu a na Austria na akụkụ ụfọdụ nke Bavaria dị na ndịda Germany. Ndị mgbasa ozi Austria kwuru na ndị otu nnapụta ihe mberede na mpaghara Salzburg nwere ịzọpụta ọtụtụ mmadụ n'ụlọ ha, ebe oke mmiri ozuzo kpuchiri otu okporo ụzọ obodo.
Dabere na Reuters, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na Vienna, isi obodo Austria, kwuru na oke mmiri ozuzo dabara n'otu elekere n'abalị Satọde karịa ihe ndekọ maka izu asaa gara aga. Na Bavaria, ọ dịkarịa ala otu onye nwụrụ na ide mmiri ahụ.
A ghaghi iburu n'uche na obughi otutu ihe ojoo di iche nwere ike ikwu na mgbanwe ihu igwe anyi na enwebeghi ihe akaebe zuru oke maka ya. Oke ihe omume ihu igwe dị adị kemgbe ọtụtụ nde afọ ma ọ jikọghị ya na mgbanwe ihu igwe. Agbanyeghị, enwere mmekọrịta n'etiti mmụba na nkezi okpomọkụ nke mbara ala na mmụba nke oke meteorological phenomena dị ka idei mmiri na Germany.
Enwere ike izere ya?
Enweela mmụba na nkatọ na gọọmentị German anaghị eji akụ niile dịnụ, gụnyere telivishọn ọha na eze, iji kọọ ihe ndị mere n'oge idei mmiri ahụ. Fourbọchị anọ tupu oke ọdachi ahụ na Germany, a kọrọ na usoro ahụ zigara mba na Belgium ozi. Otú ọ dị, odighi uru obula izipu nkpachapu anya ma oburu na ndi mmadu amaghi ka esi akpa agwa na ide mmiri ha adịghị njikere maka ọdachi dị otú ahụ, ha anaghị echekwa nri, mmiri na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ndị ọkachamara ahụ kọwara na, agbanyeghị, ọ na-esiri ike ịchụpụ n’ime awa ole na ole site n’ebe dị nso na mmiri iyi na ndagwurugwu dịka obodo Schulder.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere idei mmiri na Germany.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri na Germany
Kedu ihe bụ eluigwe na ala